Ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na ndị na-eweta ihe ọkụkọ na-ekpo ọkụ - nkwakọ ngwaahịa Ziling
Mfe Peel Aluminium Foil itinye na Akara Liner
Uzo okpukpu okpukpu okpukpu okpukpu uzo nke nwere uzo “ihe owuwu”
Nke a liner mejupụtara aluminom foil oyi akwa na nkwado ndabere oyi akwa. Ọ chọrọ igwe ihe ntinye akara. Mgbe igwe eji abanye ihe na-enye akara akara nke ejiri laminate mechie ya na egbugbere ọnụ nke akpati, a na-emechi akwa aluminom na egbugbere ọnụ nke akpa ahụ ma tinye akwa oyi akwa (kaadiboodu ụdị) na okpu. A na-ahapụ eriri nke abụọ dị ka eriri njikọ ahụ na okpu mgbe usoro kpo oku.
Mpempe ọkụ na-ekpo ọkụ nke okpukpu abụọ na mpempe akwụkwọ
Welie 'N' Peel
Ebuli 'N' Bee Aluminium Foil Induction Seal Liner
Nke a bụ otu ihe ntinye akara ntinye, enweghị nkwado ma ọ bụ akwa nke abụọ, enwere ike mechie ya na akpa site na igwe mpempe akwụkwọ ma ọ bụ igwe eletriki ozugbo. Ọ nwere ike inye akara akara na plastik ma ọ bụ iko iko nwere ike wepu ya na ibe ya, ọ nweghịkwa ihe fọdụrụ na egbugbere ọnụ nke akpa ahụ. Ihe ntinye ihe ntinye a bu ihe di nfe imeghe ya na nbuli elu 'N'.